Dakar ilaa New York City iyo Washington on Air Senegal hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Dakar ilaa New York City iyo Washington on Air Senegal hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Senegal • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Air Senegal ayaa duulimaadyo cusub laba jeer toddobaadle ah ka bilaabi doonta Dakar, Senegal.
Air Senegal ayaa duulimaadyo ka bilowday garoonka John F. Kennedy ee magaalada New York.
Air Senegal waxay ku dhawaaqday adeegga Baltimore Washington International Thurgood Marshall Airport.
Labada duulimaad ee cusub ee Mareykanka ayaa laga soo qaadi doonaa Dakar, Senegal.
Air Senegal, oo ah calanka qaranka ee Senegal, ayaa maanta bilawday duulimaadkeedii ugu horreeyay ee New York's John F. Kennedy International Airport iyo Baltimore Washington International Thurgood Marshall Airport, oo ah kii ugu horreeyay ee adeeg cusub oo laba-toddobaadle ah u dhexeeya Dakar iyo labada magaalo ee Mareykanka.
Duulimaadkii HC407 wuxuu ka dhoofay Dakar Blaise Diagne International Airport 2:56 am wuxuuna ku degay New York's JFK Airport (Terminal 1) 06:51 am maanta. Rakaabkii ku sii jeeday nawaaxiga Washington ayaa sii waday duulimaadkan ka dib markii ay soo mareen Socdaalka iyo Kastamka New York.
Duulimaadku wuxuu yimid Baltimore Washington Airport (BWI) 11:08 subaxnimo halkaas oo duullimaadkii lagu soo dhaweeyey salaan biyo -dhaqameed. Duulimaadka soo laabashadu wuxuu ka tagi doonaa Baltimore markay tahay 08:25 pm New York JFK (Terminal 1) ee Dakar halkaas oo loo qorsheeyay inay soo degto 12:25 pm maalinta xigta.
Adeeggan cusub ayaa la hawlgelin doonaa Khamiista iyo Axadaha iyadoo la adeegsanayo diyaarad casri ah oo ah Airbus A330-900neo, oo bixin doonta 32 sariirood oo Ganacsi ah, 21 kursi oo ah Premium Economy iyo 237 kursi oo ah fasalka Dhaqaalaha, nidaamyada madadaalada, awoodda kursiga , iyo isku-xirnaanta Wi-Fi ee duulimaadka. Hawada Senegal wuxuu siiyaa xiriiro ku habboon rakaabkiisa USA iyagoo sii maraya Dakar labada jiho Abidjan, Conakry, Freetown, Banjul, Praia, Bamako, Nouakchott, Douala, Cotonou iyo Libreville.
Sanadka 2019, in ka badan hal milyan oo rakaab ah ayaa u kala gooshay USA iyo Galbeedka Afrika oo la filayo inay sii koraan marka la bilaabo wadadan cusub. Senegal waa xarun ganacsi oo weyn oo ku taal Galbeedka Afrika iyo xarun dalxiis oo ay weheliso inay tahay xarunta Qaramada Midoobay ee Galbeedka Afrika.
Ibrahima Kane, Madaxa Fulinta ee Air Senegal ayaa yiri: “Ujeedkeennu waa inaan bixinno safar ku habboon oo raaxo leh oo u dhexeeya USA, Senegal iyo Galbeedka Afrika. Goobta juqraafiyeed ee Dakar oo ay weheliso isku -xidhnaanta badan ee Air Senegal iyada oo loo sii marinayo xarunteeda asaasiga ah ee dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Galbeedka Afrika ayaa u oggolaan doonta wadadan cusub inay ka kobocdo xoog ilaa xoog. Intaa waxaa dheer, waxaan rajeyneynaa inaan kicino dalabka dalxiiska Mareykanka ee Senegal si ay u sahamiso taariikhdeeda dhaqameed ee hodanka ah, xeebaha heer caalami ah iyo cunnooyinka qalaad ee dalka oo dhan ”.
Air Senegal, waa side calanka Jamhuuriyadda Senegal. Waxaa la sameeyay sanadkii 2016, waxaa iska leh dawladda iyada oo loo marayo gacanta maalgashiga Caisse des Dépots et Consignation du Sénégal. Waxay xarunteedu tahay Madaarka Caalamiga ah ee Blaise Diagne ee Dakar, Senegal.